Khabiirka Cimiladu wuxuu qeexayaa 12 Noocyada Shabakadaha WordPress ee aad si fudud u abuuri karto
WordPress waxaa laga yaabaa inuu yahay goobta ugu awoodda badan ee blogging iyo nidaamka maareynta content ee jira ee warshadaha suuqgeynta maanta. Sannadihii la soo dhaafay, WordPress wuxuu bilaabay inuu caan ka noqdo sida ugu haboon ee loo adeegsado marka ay timaado abuurista blogs. Waqtigan xaadirka ah, WordPress waxaa isticmaala tobanaan malaayiin oo horumariyayaal ah iyo suuqyadeeda macaamiisha ah si ay u abuuraan bogagyo kala duwan oo ka yimaada goobaha xirfadlaha ah si blogs ah.
Maalmahan, wargeysyada, boogaha caanka ah, iyo bogagga muusikada waxay isticmaalayaan WordPress si ay u bartilmaameedsadaan suuqooda waqtigooda. In warshadaha suuq-geynta, goobaha WordPress ayaa lagu tiriyaa sida ugu fiican.
Oliver King, oo ah takhasus sare oo ka socda Semt , ayaa halkan ku yaal liiska 12 nooc oo website ah oo aad si sahlan u abuuri karto WordPress - mikrotik sxt 5nd.
1. Website-ka E-commerce
WordPress waxa uu ka kooban yahay mawduucyo dhamaystiran iyo mawduucyo tayo sare leh si loo abuuro bogga internetka ee e-commerce. Websaytka E-commerce oo loo marayo WordPress ayaa ku jira qaababka muhiimka ah ee u sahlaya suuqyadu in ay maareynayaan kaydka iyo ku daraan baabuurta dukaamaysiga. Boggaga WordPress waxaa kale oo ay fududeeyaan bixinta amniga iyo helitaanka lacagaha iyadoo loo marayo goobaha.
2. Kulammada ganacsiga
Miyaad ka shaqeyneysaa sameynta tusmo ganacsi? WordPress waa qalabka ugu fiican ee adiga. Ka faa'iideysto WordPress si aad u dhisto website-ka ganacsiga oo aad hesho fursad aad ku darto faahfaahinta ganacsigaaga oo aad ku xirto boggaga internetka. Boggaga WordPress ayaa u oggolaanaya martida in ay ka raadiyaan ganacsiyo kala duwan.
3. Website-ka Wiki-style
Si wax ku ool ah u maamul mawduucaaga adiga oo abuuraya website-kaaga oo isticmaalaya WordPress. Badanaa loo yaqaano shabakadaha internetka, shabakadaha wiki waxay u baahan yihiin in ay isku xiraan dokumantiyada iyo boosaska la heli karo. WordPress wuxuu siinayaa aqoonyahanno fursad ay kuqoriyaan content iyada oo la adeegsanayo tags iyo categories.
4. Jaaliyadaha ku saleysan internetka
Isticmaal WordPress si aad u dhisto bulshadaada internetka oo ku salaysan mawduuc aad si fiican u baraneyso. Helaan fursad aad kula wadaagto martidaada. Isticmaal liistada martida si aad u abuurto liis ay ku qoran emails oo faallo ka bixisay mawduucaaga..Boggaga WordPress ayaa u oggolaanaya martida inay ka faaloodaan boggaga bulshada si fudud.
5. Website-yada Waxbarashada
Isticmaal WordPress si aad u abuurto shabakad waxbarasho oo aad fursad u hesho inaad ku darto ilo dhaqaale oo la xidhiidha kulliyado kala duwan. Sii macalimiinta iyo aqoonyahannada leh faahfaahin astaamo si ay si sahlan u xakameyaan oo u daraan wax ku ool ah boggaaga.
6. Bogga internetka suuq-geynta
Shabakadaha saamileyda ah ee ganacsiyada ayaa caadi ahaan loo yaqaan dad badan oo ah shabakadaha internetka. By abuuraya bogagga shabakada leh ee isticmaala WordPress, waxaad ku kasban kartaa dillado dheeraad ah adiga oo raacaya gaadiidka dhabta ah ee goobtaada. Tirada wanaagsan ee soo-booqdeyaasha waxay ku dhammaan karaan iibsashada alaabta lagaga dooday posts.
7. Website-yada muuqaalka
U ogolow alaabtaada, naqshadeynta, iyo farshaxanka inay kuu hadlaan. Boggaga WordPress waxay ka kooban yihiin mawduucyada iyo qaababka bixiya fannaaniinta fursad ay ku muujiyaan awooddooda martida.
8. Guddiga shaqada bulshada
Isticmaal WordPress si aad u abuurto guddi shaqo oo internetka ah oo macaamiishu ay u diri karaan oo ay shaqo u heli karaan si sahlan. Goobaha WordPress waa sahlan tahay in la maareeyo loona habeeyo.
9. Bogga sawir-ku-saleysan
Abuuri bogga sawir-qaadista adoo isticmaalaya WordPress si aad ugu raaxeyso mawduucyada Wiral iyo Pingraphy ee goobtaada. Sawirrada ku soo qor boggaaga adiga oo aan la kulmin khaladaad farsamo.
10. Website-ka ganacsiga
Dooro mawduucyo kala duwan iyo qaybo ka mid ah boggaaga WordPress oo maamul mawduuc si aad ugu habboonaato qeexidda ganacsigaaga.
11. Bogga internetka
WordPress wuxuu ka ciyaaraa kaalin muhiim u ah guusha website-yada blogga. Website-yada WordPress waxaa diyaarin kara qof kasta oo raba inuu helo website.
12. Wararka iyo bogga internetka
Ka dhigaya akhristayaasha martida iyo macaamiisha suurtagal ah in ay helaan mawduucaaga dhammaantood waa arrin muhiim ah marka la samaynayo website-yo wargeys iyo wargeys. Website-yada WordPress waxay bixiyaan suxufiyiin fursad ay ku daabacaan wararka tayada sare leh.
WordPress waa xulashada ugu fiican ee suuqa iyo saxafiyiinta ka shaqeynaya gaadiidka baabuurta ee websaydhooda. WordPress wuxuu ka kooban yahay mawduucyo ku filan, fiilooyin, iyo qaybo si aad u dooratid. Haddii aad ka shaqaynayso dhismaha shabakad, WordPress waa ikhtiyaarka ugu fiican ee la tixgeliyo.